पढ्नुस समग्रमा आजको नेप्से बजार, नेप्से परिसूचक १११० कै वरिपरी स्थीर | Samajik Khabar
Home मुख्य पढ्नुस समग्रमा आजको नेप्से बजार, नेप्से परिसूचक १११० कै वरिपरी स्थीर
पढ्नुस समग्रमा आजको नेप्से बजार, नेप्से परिसूचक १११० कै वरिपरी स्थीर
काठमाण्डौ, १६ मंसिर : साताको दास्रोे कारोबार दिन नेप्से परिसूचकमा सामान्य गिरावट आएको छ । ०.८६ अंकको गिरावट पश्चात परिसूचक ११११.९९ विन्दुमा अडिएको छ । त्यस्तै ए लेभर कम्पनीका कारोबार संकेत देखाउने सेन्सेटिभ इन्डेक्स ०.४४ अंकको गिरावट पश्चात २४५.७२ विन्दुमा झरेकोे छ ।
सोमबार कारोबार समयमा १६४ कम्पनीको २३ करोड २२ लाख ५९ हजार ३३१ रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ । आज कारोबार रकमको आधारमा कुनै कम्पनीको कारोबार २ करोड बढि हुन सकेन । सबैभन्दा बढि एनएमबि बैंकको रु १ करोड ९३ लाख बराबरको सेयर खरिदबिक्री भएको हो । त्यस्तै, नेपाल लाईफ इन्सोरेन्स कम्पनी, जनउत्थान सामुदायिक लघुबिक्त बिकास बैंक र एनआईसी एसीया बैंकको १ करोड भन्दा माथिकोे सेयर खरिदविक्री भएको छ ।
यस दिन सबैभन्दा धेरै नेशनल माइक्रोफाइनान्स कम्पनिका सेयरधनिले आफ्नो सम्पति ९.९५% ले बढाएका छन् । त्यस्तै महिला सामुदायिक लघुबित्त बित्तिय संस्थानका सेयरधनिले ७.८३% कमाएका छन् । त्यस्तै सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा अरुण कावेली पावर लि. परेको छ । यसका सेयरधनिले ६.५५% गुमाएका छन् ।
आज कारोबार भएका कम्पनिमध्ये ६७ वटा कम्पनिको सेयरमुल्यमा बढोत्तरी भएको छ भने सोही संख्या अर्थात ६७ वटा कम्पनिको नै सेयरमुल्यमा गिरावट आएको छ । त्यस्तै १७ वटा कम्पनीको सेयरमुल्यमा परिवर्तन भएको छैन ।
कारोबार समयमा बैंक, व्यापार र हाइड्रोपावर परिसूचकमा सकारात्मक परिवर्तन भएको छ भने अरु परिसूचकमा गिरावट आएको छ । सबैभन्दा धेरै व्यापार परिसूचकमा ३.२% को बढोत्तरी भएको छ भने लाइफ इन्सोरेन्स परिसूचकमा १.२६% को गिरावट आएको छ ।
Previous articleउपनिर्वाचन : कहाँ कसले जिते ? पूर्ण पाठ सहितको रिर्पाट
Next articleबढ्यो इन्धनको मूल्य, पेट्रोल प्रतिलिटर १०९ रुपैयाँ